Site Officiel de la Région Vakinankaratra I Madagascar Fanorenana ny biraon'ny Kaominina Mandoto - Région Vakinankaratra I Site Officiel
Mot du CR
Fanorenana ny biraon'ny Kaominina Mandoto
Ny volana may 2018 izao no heverina fa ho vita tanteraka ny asa fanorenana ny birao vaovaon'ny Kaominina Mandoto , izay raha tsiahivina dia simba ary tsy azo niasana intsony vokatry ny horohoron-tany ny 12 janoary 2017 lasa teo. Nanapa-kevitra avyhatrany ireo tompon'andraikitry ny kaominina fa horavana ny birao teo aloha , ka hanangana vaovao .
Dimy volana teo izay no efa natomboka ny asa ary hatreto dia efa tontosa hatrany amin'ny 70 ka hatramin'ny 80 % ny asa. Herimpon'ny kaominina hatreto no nenti-nanana ny asa ary talohan'ny fanombohana dia nisy ny hetsika tsenabe firaisan-kina natao tao an-toerana.
Tsy nitazam-potsiny ny ezaka nataon'ity kaominina ity ny Faritra fa nitondra tohana , dia ny tafo rehetra nanafoana ity birao vaovao ity!
Ny alahady teo dia tonga nijery ny fizotry ny asa tany an-toerana ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka izay sady mpiahy an'i Vakinankaratra , nampanantena ny tenany fa hitondra ny anjara birikiny ho famitàna ity birao mendrika dia mendrika ity.
Accueil I Mot du CR I Organisation I Actualités I District I Photos I Contact
Hôtel de la Région - Rue Jean RALAIMONGO - 110 ANTSIRABE
Copyright © 2017 Région Vakinankaratra